I-Bitcoin I-Akhawunti Yasebhange Yase-Offshore Yamukela I-Cryptocurrency
I-Bitcoin I-Akhawunti yebhange le-Offshore
I-Bitcoin namanye ama-cryptocurrensets asashisayo, izihloko ezithandekayo namuhla. Kodwa-ke, imininingwane eminingi kakhulu iyantanta ezungeza ukuthi ingenza ukusebenzisa i-Bitcoin kubonakale kudideka. Eqinisweni, i-Bitcoin ilula ukuyisebenzisa. Njengokubukela ithelevishini, awudingi ukuqonda ubunzima bokuthi i-TV isebenza kanjani ukuze ukwazi ukuyisebenzisa.
Uma usunayo i-Bitcoin, ungafuna ukuyifinyelela ngezindlela zendabuko. Ngemuva kwakho konke hhayi wonke umuntu, futhi ikakhulukazi hhayi wonke ibhange lamukela i-Bitcoin. Ngesikhathi esifanayo, ungase ufune ukuqinisekisa izinga lokuzimela kanye nokungaziwa ukuthi imali yedijithali. Ukuze ufeze lokhu, abantu abaningi bafuna i-cryptocurrency noma I-Bitcoin akhawunti yasebhange elwandle. Ngamanye amagama, bafuna indawo yokugcina imali yabo ye-e-eceleni eceleni kohlelo lokusebenza kumaselula abo; noma indawo ongayiguqula ibe yimali bese uyipaka phesheya ngokusebenzisa ithuba amabhange ase-offshore.
Ukuze uthole impendulo emfushane, ungaxoxa nengcweti enobuchwepheshe ngokusebenzisa izinombolo zocingo noma ifomu lokuphenya kuleli khasi. Sifinyelela kuma-akhawunti asebhange ase-offshore angakwazi ukufaka i-Bitcoin yakho nezinye izikhalazo ze-cryptocurrency. Okwamanje, funda kabanzi ukuze uthole imininingwane eyengeziwe.
Okokuqala, iyini i-Bitcoin? I-Bitcoin yimali eyadalwa ngo-2009. Kuwuhlobo lwemali yedijithali enwetshiwe. Inika amandla abasebenzisi ukuthi bakhokhe ngokushesha kunoma ngubani kunoma iyiphi ingxenye yomhlaba. I-Bitcoin isebenza ngaphandle komthethonqubo ophakathi nendawo. Esikhundleni salokho, iBitcoin isebenzisa ubuchwepheshe bontanga-kuya-kontanga. Inethiwekhi yeBitcoin ihlanganisa ukuphatha ukuthengiselana kanye nokukhishwa kwemali. USatoshi Nakamoto ekuqaleni kwakheka iBitcoin. Sikholwa ukuthi igama yi-alias esetshenziswa ngumsunguli. Umphakathi awazi igama langempela lomuntu noma abantu abathuthukise i-Bitcoin. I-Bitcoin yaqala ukukhishwa ngaphansi kwelayisense ye-MIT.
I-Bitcoin ingasetshenziswa ukuthenga nokuthengisa izinto nezinsizakalo ngendlela efanayo nemali ejwayelekile. Abasebenzisi bangathenga i-pizza, amakhadi wesipho e-Amazon, nezinye izinto ezivamile njengemali kanye namakhadi esikweletu. Uma ucabanga ukuthi i-Bitcoin isebenza kanjani, kulula ukuqhathanisa i-Bitcoin ngokusebenzisa ikhadi le-debit. Uma umnini we-akhawunti yasebhange esebenzisa uhlelo lwabhange lwe-intanethi, bathola imali yedijithali. Laba abanikazi be-akhawunti yasebhange bangasebenzisa uhlelo lwe-intanethi ukuthumela nokuthola ukudluliselwa kwentambo. Lokhu kudluliselwa kwentambo kubonisa inani lemali elingasuswa kwi-paper currency. Okufanayo kungenzeka nge Bitcoin. I-Bitcoin ingadluliselwa ngamaRandi wase-US, ama-Euro, noma yimuphi uhlobo lwemali. Kungase futhi kuthengiswe ngokuqondile kwezimpahla noma amasevisi.
Ngokungafani namabhange, noma kunjalo, ukuthengiselana okwenziwe kusetshenziswa i-Bitcoin kwenziwa ngaphandle komphakathi. Ukwengeza, ayikho imali yokuthengiselana ehambisana neBitcoin. I-Bitcoin ayinayo izidingo zokudalula. Abathengisi abaningi beqala ukwamukela i-Bitcoin nezinye izinhlobo ze-cryptocurrency. I-Bitcoin akuyona kuphela i-intanethi yemali ye-digital. Kukhona futhi u-Ethereum, i-Litecoin, nabanye. I-Bitcoin yiyona eyaziwa kakhulu futhi esetshenziswa kabanzi.
I-Bitcoin Isebenza Kanjani?
Kulula kakhulu ukuqala ukusebenzisa i-Bitcoin. Isinyathelo sokuqala ukusebenzisa i-smartphone bese ulanda uhlelo lokusebenza oluvumela abasebenzisi ukuthi bathenge noma bakhokhelwe ku-Bitcoin. Lezi zinhlelo zokusebenza ngokuvamile zibizwa ngokuthi yi-Bitcoin wallet. Uhlelo lokusebenza oludume kakhulu lubizwa nge-Coinbase. Abasebenzisi kumele balandele imiyalelo kuhlelo lokusebenza ukuxhumanisa i-akhawunti yasebhange noma ikhadi lesikweletu kuhlelo lokusebenza. Igama lomsebenzisi le-password lomsebenzisi webhange kanye nephasiwedi lihlanganisa inombolo ye-akhawunti yasebhange. Ukuqinisekisa ukuthi imali encane eyenziwe ngaphezu kwezinsuku ezintathu ukuya kwezintathu ingaxhuma futhi.
Izilinganiso ze-Bitcoin zigcinwa kulokho okubizwa ngokuthi i-blockchain. I-blockchain iyinhlangano ehambisanayo yomphakathi. Yonke inethiwekhi ye-Bitcoin incike kwi-blockchain. Konke ukuqinisekiswa okuqinisekisiwe kufakwe ku-ledger. Ngale ndlela, i-Bitcoin wallets ingabala ibhalansi yabo echitha imali. Ukuthengiswa okusha kungaqinisekiswa ukuqinisekisa ukuthi ukusetshenziswa kwe-Bitcoins empeleni kunomnikazi we-spender. Ubuqotho kanye nokulandelana kwesikhathi kwe-blockchain kuphephile. Baqiniswa nge-cryptography ukuze balondoloze ubumfihlo babasebenzisi be-Bitcoin.
Ukuthengiswa kwe-Bitcoin kudluliselwa kwamanani phakathi kwe-Bitcoin wallet. Lezi zinkokhelo zilotshwe ku-blockchain. I-Bitcoin izikhwama zigcina uhlamvu oluyimfihlo olubizwa ngokuthi i-a ukhiye wangasese noma inzalo. Le datha isetshenziselwa ukubhalisa ukuthengiselana. Lesi siginesha sisebenza njengobufakazi besibalo sokuthi bevela kumnikazi wekhredithi ye-Bitcoin efanele. I isiginesha isetshenziselwa ukuvimbela ukuthengiswa kokushintshwa kwanoma ubani uma ikhishwe. Isikhathi sokuqinisekisa emva kokuthengiswa kwe-Bitcoin sincane kakhulu. Konke ukuthengiswa kusakazwa phakathi kwabasebenzisi. Ngokuvamile inethiwekhi ngokuvamile iqinisekisa kubo ngaphakathi kwemizuzu ye-10.
Indlela Yokuthenga Bitcoin
Ukuthenga i-Bitcoin kulula kakhulu. Ukuze uthenge i-Bitcoin, abasebenzisi bachofoze inkinobho yokuthenga kuhlelo lokusebenza abasebenzisa njengesikhwama se-Bitcoin. I-akhawunti yasebhange yomsebenzisi isivele exhunywe kuhlelo lokusebenza ngakho akudingeki ukuthi ufake kabusha ulwazi lokukhokha. Umsebenzisi bese engena imali engathanda ukuyithenga. Ekugcineni, umsebenzisi uchofoza ukuthenga futhi ukuthengiselana kuqediwe. Kuyinto elula.
Sibiza indawo yemakethe ye-digital, njenge-smartphone yesicelo lapho abantu bengakwazi ukudayisa imali yendabuko ye-Bitcoin futhi babheke i-Bitcoin ukushintshanisa. I-platform enjalo inikeza indlela abantu abangakwazi ngayo ukudayisa ngayo imali yedijithali yama-dollar, ama-euro, yen, njll.
Sebenzisa i-Coinbase App ukukhokha noma ukukhokha
I-Bitcoin ingasetshenziselwa ukwenza noma ukukhokha ngokushesha futhi kalula ngokusebenzisa isikhwama seB Bitcoin, njengeConbase. Kuhlelo lokusebenza lwe-Coinbase, kunesithonjana sekhodi se-QR esingasetshenziselwa ukukhiqiza ikhodi yekhompyutha ukukhokha nge-Bitcoin. Umamukeli ohlosiwe uthinta isithonjana nekhodi ye-QR iboniswa. Umsebenzisi angabe esabelana ngekhodi ye-QR, i-string ehambisanayo yezinhlamvu noma ikheli le-imeyli ehlotshaniswa ngombhalo owenza inkokhelo.
Indlela Yokukhokhelwa Nge-Bitcoin Ukusebenzisa iConbase
Ukuthola ikhokha kulula. Lezi yiziqondiso ezifana nalezi zincwadi. Uma uhlelo lokusebenza lushintshile kusukela kulokhu kubhala, ezinye zeziyalezo zingase zihluke.
Khetha isithonjana se- "Akhawunti" ngasekupheleni kohlelo lokusebenza lwe-Coinbase
Khetha i-Bitcoin (BTC) Wallet.
Khetha isithonjana sekhodi ye-QR ekona elingenhla kwesokudla sohlelo lokusebenza.
Khetha "Khombisa Ikheli"
Chofoza okuthi "Yabelana" ukuze ubhale umbhalo noma i-imeyili ikheli lakho le-Bitcoin noma "Kopisha ikheli" ukuze uhlanganise nje ikheli lakho le-Bitcoin kumbhalo noma nge-imeyili.
Uma usabelane ngekheli lakho le-Bitcoin nalowo okhokhayo, angakwazi ukulandela "Indlela Yokukhokha Omunye ..." imiyalelo ngezansi.
Indlela Yokukhokha Omunye Nge-Bitcoin usebenzisa i-Coinbase
Ukuze wenze ukukhokhelwa kwe-Bitcoin komunye umuntu, umsebenzisi angacela ukuthi umbhalo okhokhelwayo noma i-imeyili inombolo yakhe ye-Bitcoin.
Owenza ukukhokhela uzochofoza isithonjana se-akhawunti ngasekugcineni kohlelo lokusebenza.
Khetha eyodwa i-wallet ye-Bitcoin (noma enye imali efanele).
Bese uthinta isithonjana engxenyeni engenhla yesokudla se-Coinbase.
Ekhasini elilandelayo, faka inani.
Ekhasini elilandelayo, kopisha futhi unamathisele inombolo ye-akhawunti noma ikheli le-imeyli elihlobene kuhlelo lokusebenza lwe-Coinbase. Faka amanothi okukhokha afanelekile.
Chofoza okulandelayo. Bese uqinisekisa ukukhokha.
Lokhu kusebenza ngendlela efanayo ngendlela yokwenza ukudluliswa kwefoni usebenzisa imali evamile.
I-Bitcoin isithandwa kakhulu ngoba ihlinzeka abasebenzisi ngezinzuzo eziningi ngaphezulu kwemali ejwayelekile. Kokunye, ungasebenzisa i-Bitcoin ukwenza ukuthenga ngasese. Kokunye, i-Bitcoin ayidingi noma iyiphi i-ID ukuze isetshenziswe. Lokhu kwenza kube yimali ekahle yabantu abangafisi ukuhlala bengaziwa. Ilungele ababazi ngasese noma labo abahlala ezindaweni ezinengqalasizinda yezimali engathuthukisiwe.
Isoftware ye-Bitcoin ibethelwe kakhulu. Ngenxa yalokhu, amacala weBitcoin aqhekekile ayivelakancane kakhulu. Cishe wonke amacala akhona ngokugenca kwemininingwane okwenzekile lapho umuntu ophethe i-Bitcoin engenandaba nephasiwedi kwi-akhawunti yakhe yedijithali. Uma nje iphasiwedi ivikelwe, i-Bitcoin inikeza ukuphepha okukhulu kakhulu kunemali ejwayelekile.
Kungaba lula kakhulu ukuthi umgqekezi antshontshe imali egcinwe ekhaya kunokuba kube njalo kubo ukweba i-Bitcoin ngaphandle kwephasiwedi. I-log eqopha abathengi nabathengisi beBitcoin ayikaze ivezwe. Kwembulwa omazisi be-wallet kuphela abasebenzisi be-Bitcoin. Lokhu kuvumela abasebenzisi ukuthi balondoloze ubumfihlo obuqinile ngenkathi benza ukuthenga nokuthengisa kalula. Ukusetshenziswa kweBitcoin kungokomthetho ngokuphelele. Ingasetshenziswa ngazo zonke izindlela zokushintshana kwezomthetho ngendlela efanayo esetshenziswa ngayo imali namakhadi wesikweletu.
I-Bitcoin ayinamngcele futhi ayidingi mvume yokusebenzisa. Mayelana nalokhu kubhalwa, akulawulwa yiliphi izwe emhlabeni. Lokho kungenzeka kuguquke. Uhlobo lwemali lumelana nokuncintisana ngoba akekho umuntu okwazi ukuvimba noma ukukhipha okwenziwe noma yiliphi inani. Izinkokhelo zamazwe omhlaba nazo kulula ukuzenza ngeBitcoin ngoba imali ayiboshelwe kunoma yiliphi igunya elithile.
Ngenxa yalokhu, imali yokuguqula imali nayo iyaqedwa. Ngokusebenzisa i-Bitcoin kususa nezinye izimali ezivame ukuthengiselana ngokwezezimali, njengezimali zamakhadi wesikweletu. Abanye abantu bathenga i-Bitcoin njengotshalomali. Benza njalo ngethemba lokuthi i-Bitcoin izokwanda ngenani eminyakeni edlule. Umlando wakamuva wohlobo lwemali ukhombisa ukuthi ukuqaphela okuqhubekayo kungenzeka, kepha i-Bitcoin kungenzeka noma ingasebenzi njengotshalomali. Yize sikubonile ukukhula okumangazayo esikhathini esedlule, akuqinisekisiwe ukuthi kuzokwenzeka ngokuzayo.
Ukuqagela ngohlobo lwemali kungacatshangelwa kakhulu. Ngale ndlela, ukuqagela ekulinganisweni kweBitcoin akuhlukile kunokucabanga ngemali ejwayelekile. Kalula nje, i-Bitcoin yindlela yokuthenga izinto. Indlela ekhuphuka ngayo uma kwenzeka kuvela omunye umuntu ozimisele ukukhokha ngaphezulu kunalokho obekunjalo.
Inzuzo eyinhloko ye-Bitcoin ayiyona inzuzo yayo njengokutshalwa kwezimali, kodwa kubumfihlo obunikezayo. Ngenxa yokuthi abasebenzisi be-Bitcoin akudingeki babhalise amagama abo, ukuthengiselana kuhlale kungaziwa. I-Bitcoins ayikwazi ukuphrinta noma ukuhlaziywa. Kuphela i-21 million ye-Bitcoins izoke ikhona. Abanayo izindleko zesitoreji futhi azithathi isikhala. Ngenxa yalokho, i-Bitcoin ingase ibonise ukuthi iyimali emisha yomhlaba wonke.
I-Bitcoin ngeke inciphise isidingo sezimoto ezisemthethweni zomhlaba zokuvikela izimpahla. Eqinisweni, okuphambene kuyiqiniso. Ukusetshenziswa kwamabhizinisi amabhizinisi angaphandle angakwazi ukwandisa ubumfihlo nokuvikelwa okutholakala ngokusebenzisa i-Bitcoin.
Kungenzeka ukwandisa ubumfihlo obunikezwa ngokusebenzisa i-Bitcoin ngokubhalisa i-akhawunti ye-digital ehambisana neBitcoin enkampanini ye-offshore. Lokhu kwakha ingqimba eyengeziwe yokuhlukanisa phakathi kweBitcoin nomnikazi wabo. Ngenxa yalokho, le nqubo ibaluleke kakhulu ekuvikeleni impahla. Ukuvikelwa okungcono kakhulu kweBitcoin kungatholakala ngokusebenzisa ukusetshenziswa kwenkampani yase-offshore.
Izinkampani zase-Offshore zihlinzeka ngokuvikeleka okungcono kakhulu kweBitcoin ngoba emazweni afana neNevis, Belize nase-Cook Islands, azikho ngaphansi kwezahlulelo zasekhaya. Ngenxa yalokho, uma isahlulelo senziwe kumuntu wase-US, ababolekisi balo muntu bayoba nesikhathi esinzima sokuyala ukuthunjwa kweBitcoin egcinwe kwi-akhawunti ebhaliswe enkampanini ye-offshore. Ungathanda ulwazi oluningi mayelana ne-Bitcoin akhawunti yasebhange ye-offshore? Ungasebenzisa izinombolo noma ifomu lokubuza kuleli khasi ukuze uxoxe nomsebenzi oqeqeshiwe.